Ithegi: ukulahlwa | Martech Zone
Indlela yokulinganisa, ukunqanda kunye nokunciphisa amaxabiso aphezulu okulahla inqwelo yokuthenga
Lwesine, Okthobha 22, 2020 Lwesine, Okthobha 22, 2020 Douglas Karr
Ndihlala ndimangalisiwe xa ndidibana nomthengi ngenkqubo yokuphuma kwi-Intanethi kwaye bambalwa kangakanani kubo abaye bazama ukuthenga kwindawo yabo! Omnye wabathengi bethu abatsha wayenesiza abatyala kuso itoni yemali kwaye ngamanyathelo ama-5 ukusuka kwiphepha lasekhaya ukuya kwinqwelo yokuthenga. Ngummangaliso ukuba nabani na wenza kude kangaka! Yintoni ukulahlwa kwinqwelo othengela kuyo? Kusenokwenzeka
Uyenza njani iMikhankaso ye-imeyile yokuShiya i-imeyile
NgoLwesihlanu, Meyi 6, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Akukho mathandabuzo ekuyileni nasekuqhubeni umsebenzi we-imeyile yokulahla inqwelo yokuthenga. Ngapha koko, ngaphezulu kwe-10% yee-imeyile zokulahla inqwelo evulekileyo, zicofiwe. Kwaye ixabiso loku-odola eliqhelekileyo lokuthenga ngokusebenzisa ii-imeyile zokulahla inqwelo zi-15% ngaphezulu kunokuthengwa kwesiqhelo. Awunakulinganisa iinjongo ezininzi ngakumbi kunondwendwe kwindawo yakho yokongeza into kwinqwelo yakho yokuthenga! Njengabathengisi, ayikho enye into ebuhlungu njengokubona ukungena okukhulu
Yintoni ukuThengisa ngokuZenzekelayo? Into ekufuneka uyazi…
NgeCawa, ngo-Epreli 3, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ukuzenzekelayo kwentengiso ligama eliyimpazamo elibonakala ngathi lisetyenziselwa yonke into kule mihla. Ukuba iqonga lesoftware linokubangela umyalezo kumamkeli nge-API yabo, kuyakhuthazwa njengokuthengisa okuzenzekelayo. Ngokoluvo lwam, oku kukunganyaniseki. Ngelixa oku kunokuba yinto ezenzekelayo ehambelana nesicwangciso-nkqubo sabo sentengiso, ayisosisombululo sokuthengisa esizenzekelayo. Ngapha koko, ndiyakholelwa kwisininzi sezisombululo zokuthengisa ezizenzekelayo ezikhoyo- nezona zinkulu
Izinto eziphambili ze-20 eziChaphazela i-E-Commerce yokuZiphatha kwabaThengi
NgeCawa, ngoFebruwari 28, 2016 NgoMgqibelo, nge-27 kaFebruwari ngo-2016 Douglas Karr
Wow, le yinto ebanzi kwaye iyilwe kakuhle infographic evela kwiBargainFox. Ngamanani kuyo yonke imiba yokuziphatha kwabathengi kwi-Intanethi, ikunika ukukhanya kwinto echaphazela ngokuthe ngqo amazinga okuguqula kwindawo yakho ye-e-commerce. Yonke imiba yamava e-commerce ibonelelwe, kubandakanya uyilo lwewebhusayithi, ividiyo, ukusetyenziswa, isantya, intlawulo, ukhuseleko, ukulahlwa, ukubuya, inkonzo yabathengi, ingxoxo ebukhoma, uphononongo, ubungqina, ukubandakanyeka kwabathengi, iselfowuni, amatikiti kunye nezaphulelo, ukuhambisa ngenqanawa, iinkqubo zokunyaniseka, imidiya yoluntu, uxanduva kwezentlalo kunye nokuthengisa
Indima yeDatha kwiNdlela ekwi-Intanethi yokuThenga
NgoLwesine, uJuni 5, 2014 Douglas Karr
Kukho amanqaku amaninzi kwindlela yokuthenga apho abathengisi banokuqokelela kwaye basebenzise idatha ukuphucula amava okuthenga kunye nokuguqula izikhangeli zibe ngabathengi. Kodwa kukho idatha eninzi kangangokuba kunokuba lula ukugxila kwizinto ezingalunganga kwaye uyeke ikhosi. Umzekelo, iipesenti ezingama-21 zabathengi bayishiya inqwelo yabo ngenxa yokuba inkqubo yokuphuma ayisebenzi. Indlela yokuthenga inamanqaku amaninzi apho abathengisi banokuqokelela khona
Utshintshiselwano lweBounce: Yintoni injongo yokuPhuma?
NgoLwesihlanu, Februwari 7, 2014 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 24, 2016 Douglas Karr
Usenokuba uqaphele kwibhlog yethu ukuba xa imouse yakho isuka ephepheni kwaye isiya kwibha yedilesi (kwaye awubhalisanga), kuya kuvela iphaneli yokubhalisa. Isebenza ngokuqaqambileyo… kwaye sonyuse iinzame zethu zokufumana ababhalisile ukusuka kumashumi ukuya kumakhulu ngenyanga. Oku kwaziwa njengenjongo yokuphuma. I-Bounce Exchange ine-teknoloji ye-Exit-Intent ye-patent ejonga ukuthambeka kwemouse, isantya semouse, indawo ekuyo imouse, kunye
Izizathu zokuba kutheni abantu belahla iinqwelo zokuthenga
NgoMvulo, Agasti 6, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Awusoze ufikelele kwi-100% yentengiso emva kokuba umntu ongeze imveliso kwinqwelo yakho yokuthenga, kodwa akukho mathandabuzo ukuba sisikhewu apho kungena ingeniso. Kukho izicwangciso zokuzoba abantu babuyele… ukumaketha kwakhona yenye yazo. Amaphulo okumaketha alandela abantu emva kokuba beyishiyile inqwelo yokuthenga kunye neentengiso zentengiso kubo njengoko betyelela ezinye iisayithi. Ukubuya kuhlala kuyinto entle kumaphulo okuthengisa kwakhona. Nangona kunjalo, emva kokuba benzile